“Iyyeruusaaleem Keessa Turaa” – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
June 6, 2017 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Ajajaa kana eegu kenneefii booda harka Isaa qulqulluu diriirsee tokkoo tokkoo isaanii eebbise sanaan booda osuma isaan ilaalanii gidduu isaaniitii gara samiitti ol ba’e. Eyyamaafi fedhii Isaatiin samii samii irraa gad bu’ee Qulqulleettii Maariyaamii irraa nama ta’e,addunyaa kana keessa deddeebi’e,ni fayyise,ajaa’iba Waaqummaa Isaa raawwate,harka Yihuudotaan qabamee fannifame,ni du’es. Awwaala keessa guyyoota sadiifi halkan sadii ture. Guyyaa sadaffaatti aangoofi humna Isaan du’a ajjeesee awwaala keessaa ka’e. Du’aa ka’ee guyyaa afurtamaffaa Isaattis eeyyamaafi dandeettii Isaatiin kabajaafi ulfina ol’aanaatiin samiitti ol ba’e,”Waaqayyo ililleefi faaruun ol ba’e….” jechuun akkuma ibsame. (Faar.47:5-6) Ijoo dubbii keenyaatti yeroo deebinu guyyaa humnaafi aangoo Isaatiin samiitti ol ba’e kana ajaja Gooftaan dabarse hanga humna argattanitti Iyyaruusaaleemiin turaa kan jedhu, sababiin isaa yoo Iyyaruusaaleemiin turan ol irraa humna argattu jedhameera; yoo achi hin turre immoo humna hin arganne jechuu dha.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2017-06-06 07:51:252018-10-26 09:21:01“Iyyeruusaaleem Keessa Turaa”
Mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaatti Ibsa Sinodoosii Qulqulluu... Promotion picture